Somalia:Madaxweynihii Hore Ee Puntland Oo Cambaareeyay Weerarkii AlShabaab Ay Ku Qaaday Hotel Maka Al-Mukarrama
Home Somali News Somalia:Madaxweynihii Hore Ee Puntland Oo Cambaareeyay Weerarkii Al-Shabaab Ay Ku Qaaday Hotel...
Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ayaa cambaareeyey weerarkii labo maalmood kahor Al-shabaab kusoo qaaddey hoteelka Maka Al-mukarrama ee magaalada Muqdisho.
Faroole oo xilligan ku sugan dalka Australia ayaa weerarkaas ku tilmaamey fal waxashnimo ah lidna ku ah bini aadamnimada iyo mabaadi’da Islaamka [waa sida uu hadalka u dhigaye], wuxuuna tacsi u direy ehelada dadkii weerarkaas ku dhintey. Si gaar ah wuxuu ugu tacsiyeeyey qoyskii iyo qaraabadii uu ka tegey Danjire Yuusuf Maxamed Ismaaciil Bari-Bari.
Isagoo hadakiisa sii wata wuxuu sheegay in dowladdu dayacdey ammaanka Danjire Bari-Bari islamarkaana ay qayb ku yeelaneyso mas’uuliyadda dilkiisa.
“Masuuliyadda waxa iska leh Dowladda Federaalka, ninkaas safiirka ah ammaankiisa in si gaar ah loo ilaaliyo ayay ahayd ma ahan inuu dadka caadiga ah iska dhex dego. Waan ku dhaliilayaa dowladda taas.” ayuu yidhi Faroole
Dhinaca kale Cabdiraxmaan Faroole wuxuu Dowladda Federaalka ku eedeeyey inaysan baadhitaan iyo daaogal ku samayn weerarrada caynkan oo kale ah.
“Tacsi wax dhaafsiisan oo ay soo sheegaan maleh, lama baaro waxba lama soo sheego dambe, taxadar dambe lama sameeyo…waan ku dhaliilayaa dowladda taas.” ayuu yidhi
Weerarkii lagu soo qaadey hotel Maka Al-Mukarrama oo qaatey muddo 15 saac ka badan waxaa ku geeriyoodey 21 qof.
Somaliland: Wefti uu Hogaaminayo Madaxweyne Silaanyo oo u safray UAE
Somalia: Maamulka Shabeellaha Dhexe oo sheegay in ay qadeen 26 Isbaaro oo yaallay degaanno ka tirsan gobolka